February | 2011 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် .. ..
Posted on February 28, 2011 by chitnge
အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် သူအောင်မြင်ခဲ့ပုံကို ပြန်ပြောတတ်သည် – ကျွန်တော့်ဘ၀ အောင်မြင်ခဲ့ရတာကတော့ အလုပ်လုပ်ခြင်းပါပဲ .. .. ကျွန်တော်တို့က အရမ်း အလုပ်လုပ် ခဲ့ရတာ။ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတဲ့ နုပဿနာ လေးမျိုးဆိုရင်- ကျွန်တော်က သုံးမျိုးကို အပြတ်အသတ် အားထုတ်ခဲ့ဖူးတာ။ ဝေဒနာနုပဿနာ ဆိုတာလည်း အပြတ်ပါပဲ တစ်နာရီလောက် ထိုင်ရတယ်။ ခေါင်းဆုံးခြေဖျားပေါ့နော် – အဲဒီလိုပဲ ဝေဒနာကို ချုပ်ဆုံးအောင် ရှုခဲ့ရတယ် (နည်းနည်းနောနော ကာလအပိုင်းအခြားတွေ မဟုတ်ဘူး)။ စိတ္တာနုပဿနာ ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က သင်္ချိုင်းကုန်းမှာ သွားပြီးတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Myanmar Posts, စိတ်, စိတ္တာနုပဿနာ, ဆရာကောင်း, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဝေဒနာနုပဿနာ, မြတ်စွာဘုရား, နုပဿနာ လေးမျိုး	| 1 Comment
အမှန်သစ္စာကိုချစ်မြတ်နိုးကြပါစို့ အခုချိန်ခါမှာ ကျွန်တော့် မကောင်းကြောင်းတွေကိုလည်း တင်ပြထားတာ ရှိနေပါပြီ — ဒီတော့ ပရိသတ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရှိတဲ့အတွက် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန် လုပ်ကြမှာပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ရဟန်းသံဃာဖက်က ရပ်တည်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို ပြောတော့ မပြောချင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကာယကံရှင် ဒါရိုက်တာ ဦးသုခက သေသွားပြီမို့ – ဒါပေမယ့် မပြောတော့လည်း ဒီအကြောင်းအရာလေးက တကယ် အမှန်အကန် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေး သမိုင်းတွင်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ – ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားလေး ရအောင်၊ ကျွန်တော်ဟာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts, သာသနာ, ဦးနှောက်	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 06
Posted on February 24, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု -06 ဟော့ကင်းရဲ့ BLACK HOLE စာအုပ် အခန်းနံပါတ်(၇) မှာ – IS THE END IN SIGHT FOR THEORETICAL PHYSICS? – ဆိုပြီး ဆွေးနွေး တင်ပြထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်ဟာ သဘောတရားရေးရာအားဖြင့် အဆုံးစွန် နိဂုံးကို ထိုးဖောက် နိုင်တော့မည်လော၊ အောင်မြင်နိုင်တော့ မည်လား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆွေးနွေထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အမြင်ကတော့ Tags: BLACK … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged BLACK HOLE, Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
ကျင့်မှ အမှန်တွေ့မှာပါ “သမိုင်းဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှေ့သွားနေတယ်” လို့ ပြောကြပါတယ် — ရှေ့သွားလေလေ၊ ရှေ့ရောက်လေလေ မတွေ့မကြုံသေးတာတွေ တွေ့ကြုံလေလေ၊ ဗဟုသုတ များလေလေ၊ တိုးတက်လေလေပေါ့ – ဒီလိုနဲ့ ဒီခေတ်မှာ ဆုံးဖြတ် သုံးသပ်လာကြတာက – လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်ရမယ် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု ယုတ္တိကျရမယ် အကြောင်းအကျိုး ခိုင်လုံရမယ် အမြော်အမြင်ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေက ဖွင့်ဆိုလာကြပြီ။ ဒီတော့ အကြောင်းသင့် အကျိုးသင့်ရှိရမယ် ယုတ္တိနည်းကျရမယ် ဒီလို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုလာတဲ့အခါ အကြောင်းအကျိုးကင်းမဲ့တဲ့ Tags: … Continue reading →
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 05
သိပ္ပံပညာထဲကဘ၀တစ်ခု-5 ဟော့ကင်းသည် Black Holes စာအုပ်ထဲတွင် ရူပဗေဒပညာရပ်၏ တိုးတက်မှုများကို ပရိသတ်များ ထိတွေ့စေလိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည် – They are not in touch with the present frontier of physics. …. ဟူ၍ ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ထို့နောက် ထူးဆန်းသော အယူအဆတစ်ခုမှာ ဟော့ကင်းသည် သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်လင့်ကစား လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းမှ ရသောအဖြေများ ရရှိခြင်းထက် ထိုအဖြေများကို ယုတ္တိနည်းကျ ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်စွာ၊ ရှေ့နောက် ညီညွတ်စွာ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Leaveacomment
Posted on February 23, 2011 by chitnge
အချိန်မှလွတ်မြောက်ပုံ ဒီနေ့ ကျွန်တော် ထူးထူးဆန်းဆန်း လေးတစ်ခု ပြောမယ်။ ကျွန်တော့်ကို မယုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ ထားလိုက်ပါ။ ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ – ငါတို့တတွေ ယုံလို့ ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြားသိရတယ်လို့ပဲ အောက်မေ့စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အချိန်က လွတ်မြောက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို နည်းနည်း ရှင်းပြမယ်။ တကယ်တော့ အချိန်က လွတ်မြောက်ဖို့ ဆိုတာ — ဆိုကြပါစို့ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်, ပါရမီ
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်, ပါရမီ	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 04
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 04 စတီဖင်ဟော့ကင်းဟာ သေမလို ရောဂါရပြီးတဲ့နောက် ပြန်သက်သာလာတော့ သူက – သူ့ဘ၀ကို အများအတွက် ကူညီဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ – … He decided that he would sacrifice his life for others. ဆိုတဲ့ သဘောကို Black Holes စာအုပ်မှာ ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ အားလုံးကိုလည်း သူ့ဘ၀နဲ့ ရင်းနှီးပြီးတော့ အကြံဉာဏ်တွေပေးတယ်။ သူအခုလို … Continue reading →
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 03
Posted on February 22, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 03 Black Holes ကို ဒီလောက် ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ဟော့ကင်းရဲ့ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စောစောပိုင်းက စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ A Brief History of Time စာအုပ်အပေါ်မှာရော ဘယ်လို သဘောထားသလဲ? လို့ – အမေးပေါ်နိုင်ပါတယ်။ A Brief History of Time က History ကို ရေးထားတာဆိုတော့ ဒါက အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အဖို့ ကျွန်တော်က … Continue reading →
The Nature of Truth Seekers
Posted on February 21, 2011 by chitnge
The Nature of Truth Seekers အမှန်သစ္စာအသိပညာကိုရှာဖွေကြသူများအကြောင်း အမှန်သစ္စာကို ရှာဖွေကြတယ် … ကျွန်တော်လည်း တင်ပြဖူးတယ် – လောကသစ္စာရှိတယ် (သမုဒိသစ္စာ)၊ အရိယာသစ္စာရှိတယ်၊ နောက် ပရမတ္ထသစ္စာရှိတယ်။ ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ အရိယာသစ္စာကတော့ သစ္စာထဲမှာ အဆင့်မြင့်တာပေ့ါ။ အမှန်ရှိတာ၊ အမှန်ဖြစ်တာကိုး .. .. မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆိုအဆုံးအမအောက်မှာ ဆိုတော့ အမှန်သစ္စာရှာဖွေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ခေတ်အဆက်ဆက် ပေါ်ထွန်းတော်မူကြတယ်။ ဥပမာ—- ကျွန်တော်တို့ ဆရာမြတ်ကြီးဆို အမှန်သစ္စာကို ကြိုးကြိုးစားစား၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေခဲ့တယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်, အတ္တ	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 02
Posted on February 20, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 02 ဒီတော့ သူ့အနေနဲ့က စကြ၀ဠာအကြောင်းကို သိအောင်ကြိုးစားမယ်၊ ကြိုးစားခြင်းဟာ နားမလည်နိုင်ပါဘူးလို့ စိတ်ပျက်ခြင်းထက် ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်း …. it is surely better to strive foracomplete understanding than to despair of the human mind. … လို့ ဖော်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါ သူ့အမှာစာမှာ ဒီအတိုင်းတွေ့ရတော့ သူ့ခံယူချက်လေးတွေကို … Continue reading →
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 01
Posted on February 19, 2011 by chitnge
သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခု (သို့) စတီဖင်ဟော့ကင်း 01 စတီဖင်ဟော့ကင်းကို သိပ္ပံပညာထဲက ဘ၀တစ်ခုဟု တင်စားပြီး ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ကြလေသည်။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသော သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုလို့ပဲ ခံယူနားလည်မိပါတယ်။ ဟော့ကင်းဟာ ရောဂါရပြီး မသေနိုင်သေးတော့ သူ့ဘ၀ကို သိပ္ပံသုတေသန ပြုလုပ်ရင်းနဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အသိပညာကို လူသားတွေအတွက် ပေးမယ်၊ ဒီနည်းအားဖြင့် သူ့ဘ၀ကို အသုံးချမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါ။ သူ့ကို ကျွန်တော်လည်း တစေ့တစောင်း လေ့လာပါတယ်။ လေ့လာရသလောက် ဆိုရင် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ် (သို့မဟုတ်) … Continue reading →